Snapcraft chishandiso chitsva chekugadzira Snappy mapakeji | Linux Vakapindwa muropa
Canonical yakaoma kushanda paayo Snappy Mapakeji, asi inoda chimwe chinhu kuvaka uye kutumira idzi mhando dzemapakeji nyore. Iko kunyorera kunogadzirisa matambudziko aya kunonzi snapcraft. Snapcraft (isingafanirwe kuvhiringidzwa neSpapcraft, sevha yeMaincraft ine mukurumbira) chishandiso chitsva chakagadzirwa neCanonical iyo inobvumidza vashandisi kurongedza chero chishandiso kuti vagadzire yakagadzirira-kushandisa-package muSnappy.
Zvinoitwa neiyo snapcraft app kutora zvese zvaunoda kurongedza mumabhuku uye kupedzisa maitiro ekupakata mune mashoma chete nhanho dziri nyore. Uye zvese nekuda kwemuvandudzi weCanonical Daniel Holbach. Uye zvakare, iyo nyowani snapcraft 0.2 vhezheni yakaburitswa, iyo inouya neine simba rakanyanya syntax, mabasa anoita kuti zvive nyore kurongedza uye zvinosanganisira zvinodiwa zvirimo zveUbuntu mapakeji, rutsigiro rwemapulagi, basa rekuchenesa, uye rondedzero nemamwe akawanda shanduko.
Mapakeji Snappy vari kure nekuve muyero yekuparadzirwa kwedesktop, asi iyi nhanho diki kubva kuCanonical inounza icho chinangwa zvakanyanya padyo. Kupa vanogadzira maturusi ekufambisa chikuva ndechimwe chezvakanakisa zvinhu zvekuita kuti 'usimudzire' icho. Zvino hupenyu hweavo vanoda kurongedza Snappys huchave nyore kwazvo uye nekudaro hunokwezva mapato anofarira.
Nenzira, kune avo vasingazive zvavari snappy mapakejiKunyangwe zvakatove zvakurukurwa mune ino blog, kutaura kuti zvinotsiviwa sechinotsiva iyo DEB mapakeji ayo parizvino anotonga kuDebian uye kwakatorwa kugoverwa, sezvazviri neBuntu. Inotarisira kuve ramangwana remapakeji edesktop distros, ine rusununguko rukuru, chengetedzo, pachezvayo-zvirimo mapakeji (asingatyori nekuda kwekushayikwa kweraibhurari), iyo inobvumidza zvinyorwa zvekushandurwa kune zvekare shanduro, pasina kudikanwa kwePPA, yakakura kusangana, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » snapcraft: Chishandiso chitsva cheCanonical chekugadzira Snappy Mapakeji
Kana vakagovana maraibhurari senge APT saka gamuchirai, zvikasadaro hapana chakasiyana nema windows .exe, uye chokwadi hachindibvumidze, isu tichafanirwa kuona maumbirwo nemapakeji nemasaini edhijitari kuti aone kana akachengeteka.
NeoKylin: iyo Chinese kopi yeWindows XP